Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Ukuvuselelwa okusha: Umhlahlandlela Wokubuka Imikhomo WaseCanada Uhlawuliswe u- $ 10,000
Umhlahlandlela wokubuka imikhomo ochwepheshile waseCampbell River uhlawuliswe u-$10,000 ngaphansi kwe-Species At Risk Act ngokusondela ngamabomu imikhomo engababulali.
NgoSepthemba 13, 2021, eNkantolo Yesifundazwe yaseCampbell River, eBritish Columbia, eCanada, iJaji Elihloniphekile u-R. Lamperson uthole u-Nicklaus Templeman, umnikazi kanye nomqhubi weCampbell River Whale and Bear Excursions, benecala lokwephula umthetho ngaphansi kokubili kwe-Species At Risk and Federal. Izenzo Zokudoba.
UJustice Lamperson uyalele uMnu. Templeman ukuthi akhokhe inhlawulo ye-$5,000 ngokwephula ngakunye, isamba se-$10,000. Uphinde wayala ukuthi lezi zimali zisetshenziselwe ukongiwa nokuvikela izilwane zasolwandle ezincelisayo emanzini aseduze neBritish Columbia.
Umhleli oyinhloko nguLinda Hohnholz.